Dhowr qaabab neefsasho oo hawo-mareenada baahsan | Micomme
Nooca hawo-mareenka loo isticmaalo cuduro kaladuwan ayaa kala duwan. Guud ahaan marka lagu hadlayo, hawo-maareyn heer-sare ah oo heer-sare ah ayaa loo adeegsadaa bukaannada xanbaarsan; hawo-laba-heer hawo-mareenka ST ee cudurada sambabka. Haddii ay tahay bukaan ka cakiran oo adag, waxaa suuragal ah in loo baahdo in la isticmaalo qalabka neefsashada Bilevel. Nooca hawo-mareenka loo isticmaalo cuduro kaladuwan ayaa kala duwan. Waxaa jira habab badan oo ah hawo-mareen aan dabacsanayn. Waxyaabaha soo socdaa ayaa sharxaya qaabka dabeyuhu leeyahay. Waad dooran kartaa hawo-mareenada aan ku tarmayn ee kugu habboon adiga oo ku xidhan xaaladaada.
Mashiinka hawada kuleylku wuxuu leeyahay hababka loo yaqaan 'CPAP', S, T, S / T modes, sida soo socota:
1. Qaabka CPAP ee hawo-mareenka: qaab joogto ah oo cadaadis hawo mareenka u socda
Cadaadis Joogto ah oo Joogto ah oo Cadaadis Joogto ah - Cadaadis Joogto ah oo Joogtada ah oo Joogtada ah oo Socota, bukaanku wuxuu leeyahay neefsasho xoog leh oo isdaba joog ah, hawo-bixiyaha wuxuu bixiyaa isla cadaadis ku jira marxaladaha dhiirrigelinta iyo muuqaalka si looga caawiyo bukaanka furitaanka marin-haweedka. Waxaa badanaa loo istcimaalaa bukaannada qaba xannuunnada hurdada ee 'APAS syndrome', neefsashada xoog leh oo iskeed uga timaadda, iyo caawimaad yar oo xagga hawo-mareenka ah. Malaha kiciyaal, ma beddelo, jirka bini-aadamka ayaa si xor ah u neefsanaya, cadaadiska waxaa loo xakameeyaa cadaadis joogto ah, iyo cadaadiska wejiga dhiirrigelinta iyo wejiga daalku waa isla siman yihiin. Neefsashada caawisa (taageerada cadaadiska ayaa ah 0) + xakamaynta cadaadiska waa habka inta badan loo adeegsado qaab aan lagu soo qaadin. Saameynta jir ahaaneed waxay u dhigantaa PEEP (cadaadis heer sare ah oo heer sare ah): kordhinta mugga haraaga ah ee shaqada, hagaajinta u hoggaansanaanta; yaraynta isticmaalka awoodda wax kicinta, hagaajinta kicinta; dayactir marin-haweedka marin-haweedka sare ee furan.
2. Qaabka hawo-mareenka:
Habka hawo mareenka iskiis ah --- Xaaladda neefsashada iskeed u dhacda, bukaanku wuxuu leeyahay neefsasho iskiis ama wuxuu ku kicin karaa hawo-mareenka inuu si toos ah hawo u soo baxo, hawo-bixiyaha kaliya wuxuu bixiyaa IPAP iyo EPAP, bukaanka ayaa xakameeya inta jeer ee neefsashada iyo saamiga dhiirigelinta / waqtiga dhiirigelinta. si madaxbanaan Bukaanka qaba neefsashada isdaba joogga ah ama bukaanka qaba hurdada dhexe ee hurdada. Waxyaabaha keena neefsashada isdaba joogga: Mashiinka neefsashada iyo inta jeer ee neefsashada bukaanka ayaa si buuxda u wada shaqeynaya. Haddii neefsashada isdaba joogga ah ee bukaanku uu joojiyo, qalabka neefsashada ayaa waliba joojinaya shaqada. Xakamaynta cadaadiska (cadaadiska joogtada ah): joogteeyo jadwalka joogtada ah ee IPAP (dhiirigelinta cadaadiska hawo-mareenka) cadaadis saaran hawo-mareenka, oo joogteyso EPAP (cadaadis hawo mareenka) cadaadis saaran hawo-baxa hawada Waa wareejin heer-ku-socodka, neefsashada caawisa + cadaadiska. xakameynaya, waana qaab aan caadi aheyn oo aan lagu soo qaadin.
Seenbar ST-30H Ventilator aan Dab-lahayn
3. Habka hawo-mareenka:
Xaaladda hawo-mareenka TM Xakameynta waqti -Maxakhadaha waqtiga xakameynaya, bukaanku ma leeyahay neefsasho iskiis ah ama kuma kicin karo hawo-mareenka inuu si madax-bannaan u-dejiyo, hawo-mareenka ayaa si buuxda u xakameeya neefsashada bukaanka, wuxuu bixiyaa IPAP (wajiga cadaadiska ee wajiga marin-haweedka toosan), EPAP (expiratory) wajiga marin-haweedka Cadaadiska togan), BPM, Ti (saamiga waqtiga dhiiri-galka / waqtiga saafiga ah). Qaabkan waxaa badanaa loo isticmaalaa bukaannada aan lahayn neefsiga laf-ahaanta ama awoodooda neefsashada iskeed u daciif ah. Waqti kicinta: Hawo-haweyuhu wuxuu u shaqeeyaa dhowr jeer oo jaangooyo ah mana la mid noqodo bukaanka neefsashada isdaba joogga ah. Xakamaynta cadaadiska (cadaadiska joogtada ah): Joogto jadwalka joogtada ah ee IPAP (dhiirigelinta cadaadiska hawo mareenka) cadaadis saar hawo-mareenka, oo sii wad aaladda EPAP (cadaadis hawo mareenka) oo ku hawo leh hawo bixiyaha cadaadiska Wakhtiga cadaadiska: wareejinta xakameynta + xakamaynta cadaadiska, aan Muuqaalka duulaanka dhif ah oo la adeegsado.
4. Qaabka S / T ee hawo-mareenka: